ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံဥာဏ် - Bezzia | Bezzia
ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျန်းမာရေးသည်ရောဂါကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံး၊ လူမှုရေး၊ ထို့ကြောင့် Bezzia မှကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကျန်းမာရေးအကြံဥာဏ်များပေးလိုပြီးသင့်အားလမ်းပြရန်အတွက်ခြေလှမ်းများကိုမှတ်သားရန်ကြိုးစားသည်။
အစားအစာ၊ ဖြစ်ရပ်အချို့၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ (သို့) အားကစားကိုမည်သို့ကောင်းစွာလေ့ကျင့်ရမည်ဆိုသည့်သတင်းအချက်အလက်အပြင်စိတ်သဘောထားပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ကျန်းမာသောအလေ့အထများကိုကျင့်သုံးခြင်းများအတွက်သင့်အားလမ်းညွှန်ချက်ပေးခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ပါမည်။
ဒီအပိုင်းမှာ ကနျြးမာရေးသိကောင်းစရာများ သင့်ကိုဂရုစိုက်ရန်နှင့်ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ရှိနေစေရန်သင့်အားလမ်းညွှန်တစ်ခုပေးမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်း ဦး ပေါက်သို့ရောက်သောအခါ atopic dermatitis ကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်နည်း
por တောရက်စ် လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ပေါင်း .
ဆောင်း ဦး ပေါက်ရောက်လာခြင်းနှင့်အတူ atopic dermatitis ကဲ့သို့ရာသီအလိုက်ပြသနာများပါလာသည်။ ထိခိုက်စေတဲ့အရေပြားပြသနာ ...
ခြေထောက်၌ Varicose သွေးပြန်ကြောများ၊ ၎င်းတို့ကိုကာကွယ်ရန်အချက် ၅ ချက်
por တောရက်စ် လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ပေါင်း .
Varicose veins သို့မဟုတ် varicose veins များသည်အရေပြားအောက်ရှိကြီးထွားခြင်း၊ ကြီးထွားခြင်းနှင့်တွန့်လိမ်လာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ မည်သည့်သွေးပြန်ကြောမှ ...
por တောရက်စ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ် .
အာဟာရနှင့်အစားအစာနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၊ အရာအားလုံးကိုရေးထားသည်ဟုသင်ဘယ်သောအခါမျှမပြောနိုင်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ သူတို့ကနေ့တိုင်းဖြစ်ပျက်တယ်။
Meal Prep၊ အပတ်စဉ် menu စီစဉ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ
Lymphatic drain သည် lymph များလည်ပတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ရန်အိမ်တွင်းကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Autophagy ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာအတွက်လဲ။
por တောရက်စ် လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်သတ္တပတ် .
autophagy ဟူသောစကားလုံး၏အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဖွေရန်၎င်းသည်ဂရိစကားလုံးများထဲမှရှာဖွေရန်လိုသည်။ ၎င်းသည်၎င်းမှဆင်းသက်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရိုးရှင်းမှု၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာများပြားလှပြီးလူတစ် ဦး စီ၏ပင်ကိုယ်စရိုက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပုံချင်းကွဲပြားနိုင်သည်။
အသက် ၄၀ နောက်ပိုင်းတွင်ပုံသဏ္န်ရှိရန်သိကောင်းစရာများ
por တောရက်စ် လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်သတ္တပတ် .
အသက် ၄၀ ကျော်တွင်ပုံသဏ္န်ကျနေခြင်းသည်ကျန်းမာရေးကောင်းရန်နှင့်စနစ်ထိန်းသိမ်းရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
por တောရက်စ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လ .